अमेरिकाको ३० शहरमा विरोध प्रदर्शन, घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारी डेरेक चौभिन निलम्बन « MNTVONLINE.COM
अमेरिकाको ३० शहरमा विरोध प्रदर्शन, घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारी डेरेक चौभिन निलम्बन
जर्ज फ्लोयडको मृत्युपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच विभिन्न स्थानमा भएको झड्प हिंसात्मक रुप लिन थालेपछि अमेरिकी शहरहरूमा कर्फ्यु लगाइएको छ । मिनियापोलिसमा अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिकको प्रहरी नियन्त्रणमा मृत्युपछि सुरु भएको विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हिंसात्मक रुप लिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार विभिन्न शहरमा प्रदर्शनकारीसँग झडप हुँदा प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास र रबरको गोली प्रहार गरेका छन् । अमेरिकाको ३० शहरमा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ । सिकागोमा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका छन् । लस एन्जेल्समा प्रहरीको कारमा आगजनी गरिएको छ ।
वासिङ्टन डिसीस्थित व्हाइट हाउसअगाडि ठूलो भिड जम्मा भएर फ्लोयडलाई न्याय दिलाउन माग गरेको छ । एटलान्टा, जर्जियास्थित दर्जनौँ भवनमा क्षति पुर्याइएको छ । सर्वसाधारणको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न प्रशासनले केही क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ ।
मिनियापोलिस, न्युयाेर्क, मियामी, एटलान्टा र फिलाडेल्फियासहितको शहरमा हजारौँ सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण र्याली निकालेका छन् । मिनियापोलिस, एटलान्टा, लास एन्जेल्स, फिलाडेल्फिया, पोर्टल्याण्ड र लुईसभिल्लोसहितका शहरमा कर्फ्यु लगाइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि प्रदर्शनकारीले कर्फ्युको अवज्ञा गर्दै सडकमा प्रदर्शनसँगै सम्पत्ति लुटपाटमा उत्रिएका छन् ।
मिन्नेसोटामा सयाैँकाे सङ्ख्यामा सैन्य प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । घरेलु सङ्कटकालमा अमेरिकी राष्ट्रपति वा प्रान्तीय गभर्नरकाे आदेशमा स्थिति नियन्त्रणमा लिन सैन्य दस्ता परिचालन गरिने प्रावधान रहेको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार साँझ जर्ज फ्लोयडको निधनले अमेरिकीमा त्रास, आक्रोश र सम्वेदनाले भरिभराउ बनाएको टिप्प्णी गर्नुभएको छ । शान्ति चाहने सबै अमेरिकीसँग सहकार्य गर्न आफू सदैव उभिने ट्रम्पले एक टेलिभिजन सम्बोधनमा बताउनुभएको छ ।
मिनियापोलिसमा प्रहरीले गत सोमबार अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडलाई निहत्था नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले हथकडी लगाएर भुईँमा लडाइएका फ्लोयडको घाँटीमा घुँडाले च्याप्दाच्याप्दै बेहोस बनाइएको थियो । ४५ वर्षीय फ्लोयडले पटकपटक आफूलाई श्वास लिन असहज भएको भन्दै मुक्त गर्न गर्नुभएको याचना प्रहरीले अस्वीकार गरेको भिडियो सार्वजनिक हुँदा विरोध सुरु भएको हो ।
घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारी डेरेक चौभिनलाई निलम्बन गरिएको छ । चौभिनमाथि व्यक्ति हत्याको आरोपसहितको मुद्दा दायर गरिएको छ । सोमबार प्रहरी अधिकारी चौभिन अदालतमा उपस्थित हुनेछन् ।
बेलायतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर : प्रधानमन्त्री बोरिस !
फिलिपिन्समा संकटकाल एक वर्ष थप !
‘द हिन्दू’ लेख्छ, ‘भारतीय सैनिकले गस्ती गर्ने १० भन्दा बढी स्थान चिनियाँ सेनाले कब्जा गर्यो’
अमेरिकामा वीच्याट र टिकटकमाथि प्रतिबन्ध